के यो बच्चाहरूलाई ना bare्गो खुट्टामा जान सल्लाह दिइन्छ? | बेजिया
के यो बच्चाहरूलाई ना bare्गो खुट्टामा जान सल्लाह दिइन्छ?
मारिया जोस रोल्डन | 30/04/2021 22:00 | सल्लाह आमा
त्यहाँ सँधै विरोधाभासी स्थितिहरू छन् कि बच्चाहरूका लागि नाoot्गो खुट्टा राम्रो छ वा जुत्ताको साथ अझ राम्रो छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा। धेरै अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई घरमा अनौंठो जानबाट रोक्छन् उनीहरूले चिसो महसुस गर्ने डरमा।
यो एक सत्य मिथक हो किनकि भाइरस श्वसन पथको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गर्छन्। यसको विपरित, यस विषयका विज्ञहरूले सल्लाह दिन्छन् कि बच्चा घरमै नाoot्गो हुन्छ किनकि यस तरीकाबाट खुट्टा अझ राम्रोसँग विकास हुन्छ।
1 के बच्चाहरूले जुत्ता लगाउनु पर्छ?
2 ना bare्गो खुट्टामा बच्चाहरूको लागि के लाभहरू छन्?
3 हेरचाह गर्नुहोस् यदि बच्चा खुला खुल्ला छ भने
के बच्चाहरूले जुत्ता लगाउनु पर्छ?
विशेषज्ञहरूले उमेरका पहिलो महिनाहरूमा बच्चालाई जुत्तामा राख्नु हुँदैन भन्ने सल्लाह दिन्छन्। जब तपाईंको सानो व्यक्तिको खुट्टा कम तापक्रम वा झटकेहरूबाट सुरक्षाको लागि आउँदछ, मोजामा लगाउनुहोस्। याद गर्नुहोस् कि बच्चाको साइकोमोटर प्रणालीको राम्रो विकासको लागि क्रॉलिling कुञ्जी हो, त्यसैले उनीहरूको खुट्टामा जुत्ता लगाउनु हुँदैन।
एक पटक बच्चा हिंड्न थाल्छ, आमाबुवाले फूटवेयरको एक प्रकार छनौट गर्नुपर्दछ जुन लचिलो र उत्तम सास फेर्छ। Or वा years बर्षको उमेर बाट, बच्चाको खुट्टा जोगाउन प्रयोग गरिएको फुटवेयर कडा र बलियो हुनुपर्दछ।
ना bare्गो खुट्टामा बच्चाहरूको लागि के लाभहरू छन्?
खुट्टाको चापको राम्रो गठनलाई अनुमति दिनेछ जुत्ता बिना खुला खुला, सपाट खुट्टा को रूपमा चिनिन्छ के कष्टबाट तिनीहरूलाई रोक्न।
जीवनको पहिलो समयमा, ईऊ बच्चाको हातमा भन्दा खुट्टामा बढी संवेदनशीलता हुन्छs नंगे खुट्टामा जानले, तपाईंको खुट्टाले तपाईंलाई वरपरको संसार पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, ना bare्गो खुट्टामा जान अनुमति दिन्छ वा सानोको सबै इन्द्रियहरूको राम्रो विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ।
खुला खुला खुट्टामा हिड्दा, सानोले उनीहरूको खुट्टामा बिभिन्न प्रकारको बनावट महसुस गर्दछ। यसले बच्चालाई विभिन्न संवेदनाहरू विकास गर्न अनुमति दिन्छ जसलाई किनेस्थेटिक भनिन्छ, यसले विभिन्न स्नायुहरूको स्थिति सुधार गर्न मद्दत गर्दछ र शरीरको जोर्नी बलियो बनाउन।
हेरचाह गर्नुहोस् यदि बच्चा खुला खुल्ला छ भने
कि यो नंगे खुट्टामा जानु राम्रो छ, यसको मतलब यो होइन कि बच्चा जहिले पनि कुनै प्रकारको फुटवेयर बिना नै हुनुपर्दछ। पोखरीमा जाँदै गरेको अवस्थामा, सानो व्यक्तिले चप्पल लगाउनु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ बिभिन्न संक्रमणहरू प्रायः संकुचित हुन्छन्।
घटनामा जब कुनै प्रकारको चोट लाग्न सक्छ जुत्ता बिना हिड्ने क्रममा, यो थाहा पाउन महत्वपूर्ण छ कि चोटले के गरेको छ। धेरै जसो अवस्थाहरूमा टिटानस खोप लिन आवश्यक हुन्छ संक्रमण खराब हुनबाट बचाउन र गम्भीर र गम्भीर समस्या पैदा गर्न।
आमाबाबुले सबै समयमा थाहा पाउनुपर्दछ कुन परिस्थितिमा सानो एक पूर्ण रूपमा ना bare्गो जान सक्छ र जब उनीहरूले जुत्ता लगाउनुपर्दछ। तपाईं बच्चालाई सँधै बिना जुत्ता बिना जान र खुला नगरी जानको लागि बानी गर्न सक्नुहुन्न।
छोटो, डाक्टरहरू र पेशेवरहरूले सल्लाह दिन्छन् कि बच्चाहरू दिनको केही समयको लागि पूर्ण रूपमा नंगुटुटि जान्छन्। भुँडी महसुस गर्ने र कुनै प्रकारको फुटवेयर बिना यसमा हिड्न तथ्यलाई यसले उनीहरूलाई अन्य फाइदाहरूको बीचमा साइकोमोटर प्रणालीको ठूलो विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मद्रेस » सल्लाह आमा » के यो बच्चाहरूलाई ना bare्गो खुट्टामा जान सल्लाह दिइन्छ?
विचारहरू गिलास जारहरू पुनः प्रयोग गर्नुहोस्
बेडसाइड टेबलका6प्रकारका बेडरूम सुसज्जित गर्न
नि: शुल्क बेजियामा शामिल हुनुहोस् र तपाईंको ईमेलमा सबै सामग्रीहरू प्राप्त गर्नुहोस्
एक copywriter बन्नुहोस्
सब भन्दा चाहिएको सौन्दर्य उत्पादनहरू